रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट तेल आयात गर्दा ३ वर्षमा ३ अर्ब बचत ! - Laltin Media
Home»आर्थिक समाचार»रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट तेल आयात गर्दा ३ वर्षमा ३ अर्ब बचत !
रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट तेल आयात गर्दा ३ वर्षमा ३ अर्ब बचत !
रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट दुई अर्ब ६६ करोड ५१ लाख ९३ हजार लिटर डिजेल आयात भएको छ । भारतको रक्सौलदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट डिजेल आयात गर्दा तीन वर्षको अवधिमा सो परिणाममा डिजेल आयात भएको हो ।
नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)को संयुुक्त लगानीमा निर्माण भएको पाइपलाइन २०७६ भदौ २४ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको थियो । पाइपलाइन सुरु भएदेखि हालसम्म दुई अर्ब ६६ करोड ५१ लाख ५३ हजार लिटर अर्थात् २६ लाख ६५ हजार १९३ किलोलिटर डिजेल आयात भएको निगमको अमलेखगञ्ज कार्यालयले जनाएको छ ।
यस अवधिमा पाइपलाइनबाट तेल आयात गर्दा ढुवानी तथा प्राविधिक नोक्सानबापतको तीन अर्ब रुपियाँ बचत भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि जेठ ३० गतेसम्म एक अर्ब १३ करोड ३१ लाख ६७ हजार लिटर डिजेल आयात भएको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक अर्ब ३१ लाख ४८ हजार लिटर डिजेल आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४८ करोड ८५ लाख ४८ हजार लिटर डिजेल आयात भएको छ । अमलेखगञ्ज कार्यालयका प्रमुख प्रदीप यादवले पाइपलाइनबाट नियमित रूपमा डिजेल आयात भइरहेको जानकारी दिए ।
पाइपलाइनबाट डिजेल आयात गर्दा ढुवानीबापतको एक रुपियाँ बचत हुने उनले जानकारी दिए । झन्डै तीन वर्षमा पाइपलाइनबाट तेल आयात गर्दा ढुवानीबापतको दुई अर्ब ६६ करोड र प्राविधि नोक्सानबापतको ३४ करोड रुपियाँ बचत भएको यादवले जानकारी दिए । पाइपलाइनबाट डिजेल मात्र आयात भइरहेको र भर्टिकल ट्याङ्की बनेपछि पेट्रोल पनि आयात गरिने निगमले जानकारी दिएको छ ।
रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म ३५ किलोलिटर दूरीमा पाइपलाइनमार्फत तेल आउने गर्छ । पाइपलाइनबाट प्रतिघण्टा २५० किलोलिटरका दरले डिजेल आउने गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । अमलेखगञ्जमा १६ हजार ४०० किलोलिटर क्षमताको डिजेल र सात हजार किलोलिटर पेट्रोल भण्डारण क्षमता रहेको छ । निगम र आईओसीको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको पाइपलाइन २०७६ भदौ २४ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको थियो ।